यस्ता राशि भएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा अलग – कसको स्वभाब कस्तो – ThikThak News
यस्ता राशि भएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा अलग – कसको स्वभाब कस्तो
मानिसको स्वाभाब राशिअनुसार व्यक्ति पिच्छे फरक हुन्छ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा थाहा छ तर कुन राशीको व्यक्तिको स्वभाब कस्तो हुन्छ भन्ने धेरै लाइ थाहा नहोला ? सायद धेरैलाई यस बारेमा खुल्दुली समेत हुन सक्छ। धर्मशास्त्रमा राशिलाई भूमि, अग्नी र वायूलगायत तत्वसँग जोडेर परिभाषित गरिएको हुन्छ । यहाँ हामीले वायू तत्वसँग सम्बन्धित राशिबारे उल्लेख गर्दैछौं ।
यो श्रेणीमा तुला, मिथुन र कुम्भ राशि भएका व्यक्ति आउँछन् । तुला, धनु र मिथुन राशि भएका व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यो हो कि यीनिहरु धेरै स्वप्नशील हुन्छन् । यीनिहरुको कल्पना वास्तममै आकाश चुम्ने खालका हुन्छन् ।
साथै यी राशि भएका व्यक्तित्व पनि धेरै रहश्यमय हुन्छ । यीनिहरु कहिले के सोच्छन् ? यीनिहरुको अगाडिको कदम के होला ? यसमा पनि कसैले अनुमान लगाउन सक्दैन । यस्ता व्यक्ति सन्तुलन कायम गर्न माहिर हुन्छ । दुई व्यक्तिबीच सम्झौता गराउनु छ भने पनि यी राशि भएका व्यक्ति अगाडि हुन्छन् । वायु तत्ववाला व्यक्ति कुनै एक चीजको अधिकता सहन सक्दैनन् । यीनिहरुलाई ब्यालेन्स गर्नु नै राम्रो लाग्छ ।
रोजगारमा कुवेत पुगेका महिला अनैतिक सम्बन्धले जन्मिएका बच्चासहित धमाधम फर्कंदै
नेपाली चेलीहरु बेच्ने खतरनाक गिरोह खोज्दै रबिको टोलि पुग्यो भारतको दिल्ली
अश्लिल कार्यक्रम चलाउने फुलचोकी मिडियाका राजकुमार कुँवर र परि तामाङ पक्राउ
तरकारीको मूल्य महँगियो, मूल्य हालसम्मकै उच्च
८ महिना हुदा खुट्टा गुमाएका यी बालकले खुट्टा पाएपछि खुशीले नाचे ( भिडियो सहित )
Previous Article अचम्म नमान्नुस , मात्र २५ रुपैयाँमा खुवाइदै पेटभर टन्न खाना
Next Article ‘ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नलागे देश सकिन्छ ’ : रवीन्द्र मिश्र